अन्तर्वार्ता | News Polar
प्रधानमन्त्री ओली भन्छ्न्, ‘मैले बोलेका कुराले बिझाएको भए क्षमाप्रार्थी छु’
काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार र सरकारवीचको आलोचना प्रतिआलोचनालाई बलिङ र ब्याटिङको संज्ञा दिएका छन् । घरमा पनि कहिलेकाँही यस्तो हुने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, मैले बोलेका कुराहरुले बिझाएको भए क्षमाप्रार्थी छु । सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा मंगलबार साँझ सम्पादकहरुसँग भावना साटासाट गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कहिलेकाहीँ अतिशयोक्ति साहित्यमा […]
बागलुङ नगरपालिका–१२ स्थित वरडाँडा पुग्दा उनी भागवत गीता वाचन गर्दै थिए। चौवालिस वर्षदेखिको यो उनको दैनिकी पनि हो। ‘सात्विक र संस्कृति पालना गरिन्थ्यो। तरकारी या आलु काट्ने भन्न पाइँदैनथ्यो। ‘काट्ने’ शब्द प्रयोग गर्दा हिंसा बुझिन्थ्यो। तरकारी बनाउने या केलाउने, आलु बनाउने आदि भन्नुपथ्र्यो,’ भागवत गीता पन्छाउँदै ‘डिल्लीप्रसाद गुरु’ले झन्डै ६ दशकअघिको विद्यार्थी जीवन सम्झिए। सबैले […]
दलले आफ्नो उम्मेदवार अगाडि बढाए म राजिनामा दिन्छु : उपसभामुख तुम्बाहाम्फे
अहिले संसदमा एउटा गतिरोध देखिएको छ । तीन तीन पटकसम्म संसदको बैठक बस्न सकेन् । यो कहिले सम्म रहन्छ ? अव यो गतिरोध अन्त्य गर्ने अर्थात प्रतिनिधि सभाको बैठक सुचारु गर्ने भन्ने निर्णय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दल जसको प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दल छ उसको हातमा छ । किन रोकिएको छ संसद, बिजनेस नभएर हो […]
सरकारले निगम व्यवस्थापनको आलोचना गर्न मिल्दैन – नेवानी अध्यक्ष खरेल
काठमाडौंः नेपाल वायुसेवा निगम उच्च चर्चाका साथै संवेदनशील विन्दुमा पुगेको छ । विभिन्न मुद्दाहरुमा पटक पटक चर्चामा छ निगम । यसमध्ये मुख्य विषय पर्यटन मन्त्रालय र मन्त्री योगेश भट्टराई तथा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलबीच तालमेल नमिलेको विषयले अहिले चर्चा पाएको छ । यो वास्तवमा गंभीर विषय हो । “तर मन्त्री र मेरोबीच कुनै समस्या […]
काठमाडौँ । नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले राष्ट्रलाई आर्थिक–सामाजिक विकासको मार्गमाा अग्रसर गराउने नेपाल सरकारको समृद्धिको यात्रामा सघाउन भारत सदैव तत्पर रहेको बताउनुभएको छ । आफ्नो सम्मानमा परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीले आज अपराह्न राजधानीमा आयोजना गर्नुभएको बिदाइ समारोहमा उहाँले तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर नेपालले विश्वलाई एकता, शान्ति र प्रगतिका निम्ति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको […]
काठमाडौं । मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ यही असोज अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ । चीनबाट लामो समयपछि नेपालमा यो उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो । उहाँको भ्रमणका लागि नेपाल सरकारले व्यापक तयारीसमेत गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा चीनले अघि सारेको बिआरआई (एक क्षेत्र एक मार्ग) परियोजना सम्झौतामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतले हस्ताक्षरकर्तासमेत रहनुभएका प्रमुख […]
पत्रकारको एउटा कार्ड बोकेर हिँड्दैमा तरबार बोकी मान्छे काट्दै हिँड्न पाइन्छ ? : मन्त्री बाँस्कोटा
सुदूरपश्चिमको बासिन्दा भएकाले ममाथि गलत ढंगले प्रहार गरियो : भीम रावल
अभियोग १ : अवसरका लागि नेतृत्वसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्नुहुन्छ । बुटवल महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदमा पराजित भएपछि केन्द्रीय सदस्यको शपथ नै लिनुभएन । असन्तुष्टि पालेर लामो समय निस्क्रिय बस्नुभयो । तर, नेताहरूबाट गृहमन्त्री बनाउने आश्वासन पाएपछि हतारहतार बल्खु पुगेर शपथ खानुभयो । यो आरोप पूर्ण रूपमा गलत छ । बुटवलको आठौँ महाधिवेशनमा सहभागीहरूले मत दिएको एउटा बाकस गणना भएन । म मात्र होइन, […]
सरकारको कमजोरीले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ : गगन थापा
नेकपा नेतृत्वको सरकार बनेको डेढ वर्ष भयो । यस अवधिमा सरकार र प्रतिपक्षको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? नेपालमा लामो समयपछि ५ वर्षका लागि सुविधाजनक ढंगले काम गर्न सक्ने सरकार निर्माण भएको छ । पहिलो, यसले लक्षणहरूमा हैन, मूल कारणहरूमै काम गर्ने गरी सोच्न सक्छ । दोस्रो, सिस्टमेटिक चेन्ज गर्न सक्छ, एक ठाउँमा हस्तक्षेप गरेर […]
भारतको पत्रबारे प्रराष्टमन्त्री ज्ञवालीले गरे यस्तो खुलासा, के सरकारले दोषीमाथि कारबाही गर्छ ?
काठमाडौं । नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसंग नयाँ पत्रिका दैनिकका पर्शुराम काफ्ले र शुरोजङ्ग पाण्डेले लगिएको अन्तरवर्ताको अंश । तपाईं चीनबाट भर्खरै फर्किनुभयो । नेपालमा आमजिज्ञासा छ कि राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण कहिले हुन्छ र रेलमार्ग कहिले बन्छ ? यस सम्बन्धमा तपाईं र समकक्षीबीच के कस्तो छलफल भयो ? मैले बेइजिङमा राज्यपरिषद् सदस्य विदेशमन्त्री […]